Iny delestazy iny | Hery - Tsiky dia ampy
Mitaraina ny gasy ka ! tena mitaraina sy mimenomenona tokoa. Efa voatanisanao ny fahavoazana rehetra. Manampy an'ireo ny fisondrotan'ny saran-jiro izay mihoam-papana nefa ny kalitao "aotra". Mizaka ny tsy eran'ny aina e ! Fa sendra ny taolam-be ianao tany Toliara izany an ! soa ihany fa nisy ny fialam-boly, tsangatsangana, tora-pasika, ranomasina, sakafo, fizahan-tany... Misaotra fa nahafinaritra ny sary tsiaro e !
Nampidirin'i Tsikisariaka @ 06:53, 2007-11-26 [Valio]
:-) dia ampy.
Nampidirin'i ikalamako @ 08:27, 2007-11-26 [Valio]
tsara ery izany fialan-tsasatra t@RN7izany, :).
Fa tsy izany ho ahy fa sendra namaky an'ilay resaka momba ny zandrin'i Hery tany @pejy voalohany za dia nahita ilay sary kay olona fantatro izy (i Fara), sy ilay zaodahan'i hery :).
Mampamangy any amindry zareo dia mahareta hatramin'ny farany hono hoe na dia efa somary taratara aza, lazao an'izany ry zareo fa tsy manana contact za no sady efa elaela no tsy nihaona tamindry zareo :).
Nampidirin'i Sonia @ 20:08, 2007-11-26 [Valio]
Sonia> omeko contact raha manome contact :-) manorata aty amiko hery@serasera.org
Nampidirin'i Hery @ 20:12, 2007-11-26 [Valio]